Mayelana NATHI - MoFoLo Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd.
IMofolo Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd., eyasungulwa ngonyaka we-2016, iyinkampani yezokwelapha esezingeni elifanele ezinikezele ekuthuthukiseni, ekukhiqizweni nasekuthekelweni kwemikhiqizo esetshenziswayo yezokwelapha esezingeni eliphakeme. Inkampani yethu itholakala eZhenglu Town Industrial Park, eChangzhou City, eSifundazweni saseJiangsu ngemvelo enhle nokuhamba okulula. Inkampani yethu ithatha indawo engamamitha-skwele angama-36,000, indawo yesimanje yokuhlanza isitshalo esingamamitha-skwele angama-5,000, kanye nabasebenzi abangama-350. Le nkampani ibilokhu iqondiswa ngumkhakha wokukhiqiza we "quality is life", futhi ihlelele ukukhiqizwa nokuthengiswa ngokuhambisana nemithetho efanele kanye nemithethonqubo kanye namazinga womkhiqizo waseChina, i-Europe, iMelika kanye namazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia. ifilosofi yebhizinisi "yobuqotho, ukunqoba-win, izinga elingaguquguquki, ukuqamba okuqhubekayo", futhi ngosizo lwe-Alibaba, i-Amazon, i-Google namanye amapulatifomu e-E-commerce kanye nemibukiso yezokwelapha yezobuchwepheshe ekhaya nakwamanye amazwe, uMofolo ubelokhu ekhula ukuncintisana kwezimakethe, kutholwe ukwethenjwa nokuxhaswa, futhi kwasungula ukubambisana kwesikhathi eside nenani elikhulu lamakhasimende aphezulu. Okukhethekile ekuthumeleni izinto ezisetshenziswayo zokwelapha.
IMofolo izinikele ekuboniseni umhlaba wonke imikhiqizo esezingeni eliphakeme eyenziwe nge-Made-in-China. Njengamanje, kukhona uchungechunge oluyishumi, ikakhulukazi kufaka uchungechunge lwamanzi, uchungechunge lokuphefumula, uchungechunge lwe-urinary, uchungechunge lwe-catheter yezokwelapha kanye nochungechunge lwesipanji sezokwelapha. Le mikhiqizo ithengiswe emazweni angaphezu kuka-80 nasezifundeni ezihlanganisa iYurophu, iMelika, i-Oceania, i-Afrika, i-Middle East, i-Southeast Asia njalonjalo. Eminyakeni yamuva nje, ngakolunye uhlangothi, iMofolo ikhulise ukubambisana namakhasimende ukuwasiza ukuthi enze imikhiqizo emisha, ngakolunye uhlangothi, ibilokhu ihlanganisa ngokuqhubekayo ukuthengwa kwezinto ukufeza intuthuko eqhubekayo yomkhiqizo wayo.
Umkhiqizo wesigaba sokuqala ezimbonini ezisetshenziswayo zokwelashwa zomhlaba wonke
Ukunikeza amandla okwenziwe-eChina ngekhwalithi edume umhlaba wonke
Ukwakha isigaba sokuphupha ukuze kufezeke amaphupho abasebenzi
Inani Eliyinhloko Lenkampani
Ngokuzayo, eqondiswa umqondo wokuthi "ukufunwa kwamakhasimende" futhi ngenhliziyo enokubonga, uMofolo uzoqhubeka nokulwela ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo engcono, intengo enhle kakhulu kanye nensizakalo yokulalelisisa. Ukuze sibe "ngumkhiqizo osezingeni eliphakeme ezimbonini ezisetshenziswayo zokwelashwa kwamazwe omhlaba", sihlale sisendleleni yokuqhubekela phambili.
Silangazelela ngobuqotho ukusebenza nawe ngesandla ukudala ikusasa eliqhakazile!